တပွားမှမရပဲ အလကားကွငွောပေးခါမှ ကုမ်ပဏီက ဝုနျးလိုကျလို့ အရှကျ​​​ကှဲရပွနျပီ နခွေညျဦး – Youth Bar
သူမ Review လုပျထားတဲ့ကွညောတငျလိုကျပွီးမကွာခငျမှာပဲ ထိုပစ်စညျးရောငျးခသြညျ့ကုမ်ပဏီမှ ခြီခြီးနဲ့ လုံးဝပတျသကျမှုမရှိကွောငျး တငျလိုကျလို့ အရှကျတှတေဖွနျးဖွနျး ကှဲသှားတဲ့ ခြီခြီး
သူမ Review ဗီဒီယိုတင်လိုက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ ထိုပစ္စည်းရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီမှ သူမနှင့် လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း တုန့်ပြန်ခံလိုက်ရတဲ့ နေခြည်ဦး
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ရက်လောက်ကလည်း အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု review ရေးခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်များမှ နေခြည်ဦးတင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို မဝယ်ကြဖို့ တင်နေကြပါတယ်နော်။ ဒီအဖြစ်တွေကို သိသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီမှ နေခြည်ဦးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နော်။
” ⚠️ ⚠️ယခု social media ပေါ်တွင် ပြန့်နှံ့လျှက်ရှိသောနေခြည်ဦးနှင့်သူ၏ Instagram Story တွင်ကြော်ငြာထားသောWonder Bath Brand သည်နေခြည်ဦးနှင့်အတူမည်သည့်အခါကမှလက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်းနှင့် မလိုလားအပ်သောပြသနာများပေါ်ပေါက်လာမည်ကို မလိုလားသောကြောင့် Wonder Bath customer များအားအထူးလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။
နောက်နောင်တွင်လည်း သူမနှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတိအလင်းကြေငြာအပ်ပါသည်… ယခုဖြစ်ရပ်သည်လဲသူမ​၏စိတ်သဘောထားဖြင့်သာပြုလုပ်ချင်းဖြစ်ပြီး Wonder Bath Myanmar နှင့်မသက်ဆိုင်ပါကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်
Wonder Bath Myanmar နှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူများမှာ1. Kelvin2. Yayy Yayy3. Carrieတို့နှင့်သာလက်တွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁ မှစ၍မည့်သည့် celebrity များနှင့်
Activity များပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်း…ပြည်သူနဲ့အမြဲရပ်တည်လျက် ” လို့ ကုမ္ပဏီ Page တွင် တင်လာပါတယ်နော်။
သူမ Review ဗီဒီယိုတငျလိုကျပွီးမကွာခငျမှာပဲ ထိုပစ်စညျးရောငျးခသြညျ့ကုမ်ပဏီမှ သူမနှငျ့ လုံးဝပတျသကျမှုမရှိကွောငျး တုနျ့ပွနျခံလိုကျရတဲ့ နခွေညျဦး
” ⚠️ ⚠️ယခု social media ပျေါတှငျ ပွနျ့နှံ့လြှကျရှိသောနခွေညျဦးနှငျ့သူ၏ Instagram Story တှငျကွျောငွာထားသောWonder Bath Brand သညျနခွေညျဦးနှငျ့အတူမညျသညျ့အခါကမှလကျတှဲလုပျကိုငျခွငျးမရှိခဲ့ပါကွောငျးနှငျ့ မလိုလားအပျသောပွသနာမြားပျေါပေါကျလာမညျကို မလိုလားသောကွောငျ့ Wonder Bath customer မြားအားအထူးလေးစားစှာအသိပေးအပျပါသညျ။
နောကျနောငျတှငျလညျး သူမနှငျ့လကျတှဲလုပျကိုငျမညျမဟုတျကွောငျးအတိအလငျးကွငွောအပျပါသညျ… ယခုဖွဈရပျသညျလဲသူမ၏စိတျသဘောထားဖွငျ့သာပွုလုပျခငျြးဖွဈပွီး Wonder Bath Myanmar နှငျ့မသကျဆိုငျပါကွောငျးအသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ
Wonder Bath Myanmar နှငျ့လကျတှဲလုပျကိုငျခဲ့ဖူးသူမြားမှာ1. Kelvin2. Yayy Yayy3. Carrieတို့နှငျ့သာလကျတှဲ လုပျကိုငျခဲ့ပွီး ဖဖေျောဝါရီလ ၂၀၂၁ မှစ၍မညျ့သညျ့ celebrity မြားနှငျ့
Activity မြားပွုလုပျခဲ့ခွငျးမရှိခဲ့ပါကွောငျး…ပွညျသူနဲ့အမွဲရပျတညျလကျြ ” လို့ ကုမ်ပဏီ Page တှငျ တငျလာပါတယျနျော။
နောကျဆုံးအခြိနျမှာတောငျ သမီးလေးကို မတှလေို့ကျရဘဲ ဘဝတဈပါးသို့ ကူးပွောငျးသှားပွီဖွဈတဲ့ ခဈြသုဝရေဲ့ဖခငျ